Onye ndu nke onye ọ bụla nwere nkwanye ugwu na Alaskan Malamute - Reeddịrị
A na-akpọkarị ya Ọjọọ , Alaskan Malamute bu ezigbo onu ahia ma burukwa ndi kasị spitz-ụdị Arctic canine .
Ha nwere ihe yiri nkịta ọhịa ma ha bụ nkịta na-arụ ọrụ dị arọ mere ka ha gaa ebe dị anya. Ma Malamute ndị ezinụlọ na-adabere na ya na ngwugwu gị? Nọgidenụ na-agagharị gia ma chọpụta.
Akụkọ ihe mere eme: Ebee ka Alaskan Malamutes si?
Kedu ihe Alaskan Malamute dị?
Alaskan Malamutes ọ bụ ezigbo nkịta ezinụlọ?
Ilekọta Alaskan Malamute gị
Ahụike: Ogologo oge ole ka Alaskan Malamute dị?
Ego ole ka Alaskan Malamute na-efu?
Eziokwu & Isi ihe banyere Alaskan Malamute
Na-agbaji Pros & Cons nke Alaskan Malamutes
Ọzọkwa :gụ: Alaskan Malamute Mixes
Ịbụ otu n'ime ụdị nkịta kacha ochie , a kwenyere na Alaskan Malamutes sitere na afọ Paleolithic. Nke ahụ dịkarịa ala 10,000 afọ gara aga!
Aha ha sitere na agbụrụ Inuit na-awagharị awagharị a na-akpọ 'Mahlemiut.' Ha mepụtara ụdị ịchụ nta akàrà na anụ ọhịa bea, ewezuga ịbụ ndị nkịta sled pụtara ịdọpụta nnukwu ibu .
Ha bụkwa blanket na-ekpo ọkụ n’abalị.
N'agbanyeghị oke ha, fido a na-eguzosi ike n'ihe ma dị nwayọ na-eso ezinụlọ ndị mmadụ bi nso. O di nwute, ha ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ n'oge ọla edo nke 1896.
Nkịta nkịta na-ewu ewu, a gafere Alaskan Malamutes na ụdị ndị ọzọ iji mepụta canine ọsọ ọsọ. Nke a dugara na ịgbanye ọbara ọbara nke Malamute.
Otu nwoke aha ya bụ Arthur Walden zọpụtara ụdị ahụ, ọ bidoro itolite Kotzebue Malamutes . Straindị nsogbu a ka enyere Oriakụ Ava Seely, mgbe ahụ nsogbu abụọ ọzọ pụtara - M’Loot na Hinman .
N'oge a na-alụ Agha Worldwa nke Abụọ, a na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ iji buru ibu ma jiri ha mee ihe na nchọta. N'ihi ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge njem na Antarctica, e bibiri nkịta ndị ahụ.
Site na mbibi ha, American kennel Club (AKC) - nke naanị ghotara nsogbu 'Kotzebue' ruo oge ahụ - meghere ndebanye aha maka nsogbu atọ niile.
Malamutes egosipụtawo nkwụsi ike ya na oge oge. Taa, Mals niile sitere na ya Ch Toro nke Bras Coupe , ka ịdị n'otu nke nsogbu atọ a .
Ọtụtụ oge, Malamutes na-ehie ụzọ dịka ya Saịberịa Husky nwanne nna, ma ha bu udiri anumanu di iche iche .
Dịka AKC si ọkọlọtọ izu , Alaskan Malamutes bụ ezigbo anụ na nkịta miri emi nwere mpako. N’elu isi sara mbara ha, enwere ntị nwere akụkụ nwere akụkụ atọ, ya na nnukwu ube.
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ha nwekwara ike ịnwe anya na-acha anụnụ anụnụ, a na-ewere ya dị ka 'mmejọ erughị eru.' Anya ha nke yiri almọnd kwesịrị ịdị aja aja ma ọ bụ gbaa ọchịchịrị.
Nke a bụ ihe ị ga-eburu n’uche ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ị nweta Mal maka ihe ngosi nkịta.
Na njedebe nke ahụ ha, ọdụ ọdụ ya dị ka paịl na-efegharị efegharị.
Echefula: Nkịta ndị dị ka wolf
Ogologo ogo & arọ nke Alaskan Malamute
Mgbe ị hụrụ Malamute tozuru etozu ka ọ na-eguzo n'akụkụ mmadụ, o zuru ezu iji mee ka onye ọ bụla nwee ụjọ. Dị ka ụdị ndị ọzọ, pooch a nwere dimorphic mmekọahụ - ụmụ nwanyị dị ntakịrị karịa ụmụ nwoke .
Uteskpụrụ dị elu nke Malamutes kwụ n’etiti 23 na 25 sentimita asatọ (58 na 63.5 cm) na ubu ma tụọ 75 ka 85 pound (34 ka 39 n'arọ).
Ha na-abakwa na nnukwu ibu. O nwere ike ịbụ na ị hụla a Nnukwu Alaskan Malamute na Facebook ma ọ bụ Instagram, mana ha nwere ike itolite ruo sentimita iri atọ na asatọ (89 cm), nke ịdị arọ ya karịrị kilogram 86 (kilogram 86).
Kedụ maka Miniature Alaskan Malamutes? Alaskan Klee Kais erere dị ka obere nsụgharị, mana ha bụ n'ezie ngwakọta nke Huskies abụọ dị iche iche.
Ma ị gara maka ọkọlọtọ ma ọ bụ nnukwu Malamute, nkịta a agaghị enwe obi ụtọ na ụlọ . Ha kwesiri ibi n'ulo sara mbara ebe ha nwere ike ịrụ ọrụ ma kpọọ n'efu.
Uwe na agba: Alaskan Malamutes ọ bụ hypoallergenic?
Mba, ha anaghị arịa ọrịa nfụkasị ahụ. MALS wụsara moderately n'afọ niile ma na-afụ uwe ha n'oge.
Ha nwere Uwe mkpuchi abụọ nke nwere akwa mkpuchi buru ibu ma dịkwa oke ogologo, na mkpuchi ajị anụ, mmiri na-agbapụta mmiri nke akọwapụtara dị ka mmanu.
Alaskan Malamutes nwere aji mara mma nke na-abịa na agba dị iche iche na Nchikota nke agba ntụ na-acha oji na nke ojii, ọbara ọbara, na sable shades, nwere akara ihu ọcha . Maka ihe ndozi, naanị agba agba siri ike na-acha ọcha.
Echefula: Ihe ikwesiri ima banyere White Malamute dị ụkọ
Ekwela ka àgwà nke canine a dị ike ma dịgide na-atụ gị ụjọ. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ ọcha a ga-agwa gị na ọ bụ ihe ezigbo anụ ụlọ maka ezinụlọ nwere ahụmịhe na-elekọta nkịta buru ibu .
Ọzọkwa, biko tụlee na ha bụ ọgụgụ isi na nna nna wolf. Ya mere, ha ga - anọnyere ụmụ mmadụ ndị nwere aka siri ike ma na-ahụ n'anya ịzụ ha.
Otu ha nwere ike ịtụle dị ka alpha nke mkpọ ahụ.
Ndi Alaskan Malamutes di egwu?
Anụmanụ ọ bụla nwere ụdị ịchụ nta na-eche na ọ bụ enweghị mmerụ ma ọ bụ na-eme ihe ike. Mana ruo ugbu a, ọzụzụ kwesiri ekwesi na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n’otu oge ọ dịka ọ na - edozi okwu a.
Ihe kachasị na ha nwere ike ime.
N'ụzọ dị ịtụnanya, ịnweghị ike ịdabere na Alaskan Malamute ka ọ bụrụ nkịta na-eche nche n'ihi na ha bụ ezigbo enyi na enyi .
Fọdụ ndị mmadụ na-ewere Alaskan Malamute dị ka ndị dike dị nro nke nwere ike ịzụlite ụmụ kittens. Lee ihe onyonyo a ka otu Niko na Phil si na Milo na-emekọ ihe.
Ha ka nwere ndammana elu-eri anụ mbanye , yabụ gbaa mbọ hụ na gị na ndị ọzọ na-akpakọrịta, obere anụ ụlọ, yana ụmụaka.
Ndị ụmụ nwanyị na-ahọrọ mkpakọrịta mmadụ karịa ndị ibe ya na-agba agba, na-eme ka ha dị mma maka ezinụlọ na-azụ anụ ụlọ ebe ha nwere ike ịnabata nlebara anya niile.
Ọ bụrụ na ị kwe ka anụ ụlọ gị na-atụrụ ndụ onwe ya, gbaa mbọ hụ na ejiri ụlọ ngọngọ nke nwere ụkwụ isii n’ogologo wee lie ụlọ gị n’enweghị nsogbu.
Alaskan Malamutes bụ ndị na-egwu ala ma nwee ike ịrịgo nke ọma. Ọ bụ nsinammuo nke siri ike n'ime ha, yabụ ị ga-ebi na eziokwu ahụ na ị nwere ike ịzụ omume a n'ime ha.
Ihe ị nwere ike ime bụ ịkụziri nwa gị akwụkwọ ka ọ gwuo ebe a họpụtara.
Ndi Alaskan Malamutes na-agba ụja nke ukwuu?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ị nweta Alaskan Malamute nke gị, ọ kachasị mma ịmara na ha dị ka anụ ọhịa wolf ndị na-ahọrọ ikwu okwu ma ọ bụ ịkwa ụda olu site na mkpu, ọ bụghị ọtụtụ na ogbugbo.
Jikere maka igba mkpu dị ka ihe ọ bụla nwere ike ịhapụ ha - sirens, nkịta ndị ọzọ na-agba ụja, ma ọ bụ mgbe ị na-agwa gị okwu.
Iji nye gị echiche nke ihe ga-adị ka, lee vidiyo a nke Cedar na-ebe akwa na obere enyi ya mmadụ.
Ọ ga-akachasị mma ma ọ bụrụ na ị hapụghị ụdị a naanị. Ha anaghị enwe obi ụtọ itinye oge n’onwe ha n'ihi na ọkara ụbọchị, karịsịa maka otu ụbọchị dum, ma ọ bụ ọzọ, ha ga-emebi.
Anyị na-agwa ha ka ha gaa n’ụlọ ebe a ga-enwe onye ga-eso ha.
E wezụga ejiji, mmega ahụ, na nri, ị kwesịrị ịma na Alaskan Malamutes bụ akwa mmezi enweghị ike ibi ndụ ntụsara ahụ na ebe dị ọkụ.
N'ihi na a na-azụ ha ka ha guzo na ihu igwe oyi, ma ha nwere akwa mkpuchi, a na-ewere ihe ọ bụla karịrị ogo 80 (26.6 ℃) dị oke ọkụ maka ha.
Ha bụ anụ ụlọ dị n'ime ụlọ, ọ ga-achọkwa ụlọ ntụ. Ọ kachasị mma iji zere anyanwụ ma nwee mmiri dị ọcha mgbe niile.
Otu mkpa Alaskan Malamute chọrọ
Ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị ga-abụrịrị bupụrụ abụọ ma ọ bụ ugboro atọ n'izu , ma ebe ọ bụ na ha molt biannually - mmiri na udu nmiri - brushing kwesịrị mere kwa ụbọchị site na iji a slicker ahịhịa ma ọ bụ ihe undercoat zaa iji belata iwefu.
Malamutes na-esonye na ihe ndozi na-asa ahụ kwa izu, mana dịka anụ ụlọ, ekwesighi ịme ya mgbe mgbe. Ọ bụrụ na ị na-eche ma Malamutes na-esi isi, ha anaghị, ekele ha pụrụ iche na-enweghị isi, uwe nhicha onwe .
Ọ bụrụ na ị bi na oyi ma ọ bụ gburugburu ebe obibi dị ọcha, ịsa nkịta gị otu ugboro abụọ n’afọ zuru ezu .
I nwekwara ike ịsa enyi gị aji mgbe ọ dị mkpa, dị ka mgbe ọ ruru unyi mgbe ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-egwu egwu, mana gbalịa gbatịa ya ruo izu isii na isii ewepu igbochi uwe ya ihicha.
A ga-eme ka ezé na-ehicha ezé ugboro atọ n'izu, ebe a ga-enyocha ntị kwa izu maka àjà na ihe ịrịba ama nke ọrịa.
Ghichaa mbọ ya mgbe niile ka ọ ghara ịda mbà na ịgbawa, nke na-ewute nkịta.
Bido usoro ị ga-eji na-akwadebe onwe gị oge niile ka Mal pup gị wee mara gị ahụ. Gaghị achọ ịgba mgba nnukwu nkịta iji jide ya aka ma ọ bụ họọ ezé ya.
Nri: Gịnị ka Alaskan Malamutes na-eri?
Ole na ụdị nkịta nri ị na-eri nri gị kwesịrị ịdabere na ibu anụ ụlọ gị, afọ, metabolism, na ahụike .
Elu-mma akọrọ kibbles bụ ihe magburu onwe nhọrọ, ma ị nwekwara ike gbalịa a raw nri. Ihe gbutere - ọ dị oke ọnụ, dị mgbagwoju anya ịkwadebe, ma na-ewe oge.
I kwesịkwara ịma nke nri ndi mmadu dị nchebe na enweghị nchedo maka canines.
A maara ụmụ anụmanụ dị ka 'ndị na-enye nri dị mfe' ma nwee ike ịnwụ na obere. Ihe dị ka iko 2 nke nri nkịta kwesịrị ime , ma ikekwe ha chọrọ ihe na-erughị ihe ị na-enye, ya mere gbalịa belata na-emeso , zere inyefere nri, ma kee nri n'ime nri abụọ.
Na-eme ihe banyere mbugharị nke Malamute gị
Ha nwere ume dị ka oke ha, nke pụtara na ha ga-achọ ọtụtụ mkpali anụ ahụ na nke uche. Ebumnuche maka ọ dịkarịa ala 1 ½ ruo 2 mgbatị ahụ kwa ụbọchị .
Mana ọ bụrụ n’inwere nwa nkịta Alaskan Malamute, emebigaghị ókè n’ime afọ abụọ mbụ ọ dịrị ndụ . Kwe ka ahụ ya tolite, ọkachasị ọkpụkpụ ya tupu gị ewere ya na-agba ọsọ ma ọ bụ na-agba ugwu.
Nke a nwekwara ike igbochi ọrịa dịka dysplasia.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịnwale ihe omume dị iche iche ga-adị nwa gị aji anụ mma, gaa ebe igwu mmiri. Ọ nwere mmetụta dị ala n'ahụ obere ahụ ya ma na-enyere aka ịwụfu n'okpuru nchịkwa.
Chọrọ onye ga-enyere gị aka rụọ ọrụ? Malamutes n'anya nwere nzube ! Ọ bụghị naanị na ha ga-enwe obi ụtọ sledding ma ọ bụ skijoring, kamakwa na-arụ ọrụ.
Malamutes bụ nkịta siri ike nwere nkezi afọ ndụ nke afọ 12 ruo 16 . Ihe dị mma gbasara ahịrị agbụrụ bụ na ha nwere ndekọ ahaziri iche nke ihe a kara aka na ha.
Ihe omuma a nwere ike inyere gi aka mgbochi .
Ọ bụ ndepụta sara mbara, mana ọ pụtaghị na Mal gị ga-ekwe nkwa ịmalite otu ma ọ bụ karịa n'ime nsogbu ndị a.
Ọ ga-adabere na ozuzu ozuzu na ụdị nlekọta nke ndị nwe ha na-enye ha.
Ahụike eze na nsogbu ọnụ
Alaskan Malamutes nwere ohere dị elu nke ịmalite ire ere site na ezé na goms, ya mere ịdị ọcha nke ọnụ dị mkpa.
Ọrịa nwere ike ibute nsogbu nke obi, imeju, akụrụ, na nkwonkwo ha. Ọ nwedịrị ike belata ndụ ha site na 1 ruo afọ 3 .
Ha na-adịkarị mfe nwa nkita njigide - mgbe nwa nkita anaghị ada. Dabere na oke o siri ike, ọ nwere ike iwepu ya.
Otu ihe gbasara ụdị a na - eme ka ọ nwee ike ibute ọrịa na - egbu egbu dị ka parvo, oria nkita, na distemper .
Ọ bụrụhaala na ị ga-esoro agbapụ ya, i kwesịghị inwe ihe ọ bụla na-echegbu onwe gị.
Alopecia X bụ ọrịa akpụkpọ anụ nke na - emetụta naanị nkịta na ntutu isi - ọ bụghị ọkọ ma ọ bụ ihe mgbu. Ihe kpatara ya bụ gland hormone na-adịghị arụ ọrụ nke nwere ike idozi ya na nsị.
Enweghi ike igbanye ogwu ogwu obula nke achoputara na onodu a.
Zinc-anabata dermatosis nwere ike ime ka mkpuchi Mal gị bụrụ nke na-adịghị mma n'ihi enweghị zinc ma mesoo ya mmeju zinc .
Ọtụtụ yiri eczema, ma ọ bụ ọnọdụ naanị na nkịta. Ga-ahụ akọrọ, nke na-eme ka ọ na-eto ma nwee ike ibute ọrịa nke abụọ, nke ga-agba ọkọ.
Nkịta gị nwere ike itolite na ya ma ọ bụ bụrụ nsogbu na ndụ gị niile.
Bụ oke ibu bụ nchegbu nkịtị na ọtụtụ nkịta buru ibu, nke nwere ike ibute nsogbu nkwonkwo. Enwere ike ịme ihe a n'ụzọ dị mfe na nri siri ike yana ibi ndụ na-arụ ọrụ.
Gbochie nri nri nri ụlọ gị. Ọbụghị naanị na nke a adịghị mma, mana ọ ga-akwalitekwa agwa adịghị mma dịka arịrịọ.
Ikpere na hip dysplasia bụ ọrịa ọzọ nke ọtụtụ ụdị anumanu nwere. Enwere ike ibute ya n'ihi ito ngwa ngwa.
Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ụmụ nwanyị na-ejigide ihe omume dị nwayọ ma na-atọ ụtọ iji zere ịdọbi nkwonkwo ha tupu ha emechaa.
N'agbanyeghị afọ ole, oke ibu nwere ike ime ka ihe mgbaàmà ka njọ dị ka mgba mgba ije. Nchọpụta oge dị mma n'ihi na, n'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịwa ahụ.
Mkpụrụ ndụ ihe nketa a na-akpata site na uto na-adịghị mma, na ebe ọ bụ na enwere ike keta ya, ọtụtụ ndị ọkachamara anaghị akwado ha ka a zụọ ha.
Malamutes nwere dwarfism ga-adị mkpụmkpụ karịa ka a tụrụ anya ya. Ọ bụ ezie na ha enweghị ahụ ụfụ ọ bụla, ha ga-adị ka nkwarụ .
A na-eburu nkịta ndị nwere agba dị ka Alaskan Malamutes bloat ma ọ bụ afọ ighikota . Nke a nwere ike ịnwụ n'ihi na nkịta gị enweghị ike iwepụ ikuku oke.
Ọ bụrụ na ị hụ pooch gị na-atụgharị anya na-enweghị ihe na-abịa, ma ọ bụ na ọnọdụ ekpere maka ogologo oge, kpọta ya na vet ozugbo. Likelywa ahụ nwere ike ịchọrọ.
Neuropathy dị n'akụkụ
Nsogbu akwara a na-egbu nkịta, ndị na-adị ndụ na ya na-achọkarị ngwaọrụ enyemaka iji duga ndụ ndị nkịtị. O siri ike ịchọpụta dịka mgbaàmà dịka adịghị ike, adịghị ike nhịahụ, enweghị nguzozi, na-egosiputa mgbe nwa pup gburugburu gburugburu izu asatọ .
Kpachara anya maka Polyneuropathy , nakwa. Ọ na - ebute ntachi obi nke nwere ike ịdị nro ma sie ike, mana ọ gaghị egbu egbu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nkọwa nke ihe kpatara nkịta gị ji ebu ibu ma ọ bụ akwa uwe ya na-adị njọ, ọ nwere ike ịbụ nsogbu thyroid nke na-akpata adịghị mma hormonal.
Àgwà omume dị ka ịkpa ike ma ọ bụ ụjọ na-egosipụta mgbe ụfọdụ.
Onye ị tụkwasịrị obi ga-enwe ike inye ọgwụ gị ga-esi na ya gafee.
Ọganihu Retinal Atrophy (PRA) na cataracts dịkwakarị na Alaskan Malamutes. Ọ bụ ezie na enwere ike idozi nke ikpeazụ na ịwa ahụ, PRA anaghị agbanwe agbanwe ma ọ ga-akpata ìsì.
Ndị na-azụlite aha a ma ama na-ejide n'aka na ngwongwo ha na-agafe mkpụrụ ndụ ihe nketa maka PRA iji jide n'aka na ha doro anya na ọrịa a.
A na - akpọkwa ọrịa anya ọzọ Ọrịa VKH . Nke ìhè ka njọ site na anwụ, otu n'ime ihe mgbaàmà ya na-eme ka ihe na-acha oji na Mal gị ghọọ pink.
O nwere ike na-egbu mgbu ma nwee ike ikpu ìsì.
Enwekwara ụbọchị ikpu ìsì ma ọ bụ Hemeralopia. Ihe ejiri mara anu ulo gi n’anwu anwu ma nwee nsogbu n ’ehihie. Nke a na-egosipụtakarị ihe dị ka izu asatọ.
Idiopathic Akwụkwụ na-adọ
A na-eketa ọdụdọ ma na-egosiputa n'etiti ọnwa isii na afọ atọ.
Ọ bụrụ na Malamute gị egosiputa njide nke ọdịdọ, bido ọgwụgwọ ozugbo enwere ike ijide ya.
Nkịta na-arịa shuga chọrọ ịmịnye insulin oge niile n'ihi na ahụ ha enweghị ike ịgbari shuga dị n'ọbara ha.
Hazie nleta na veti ma ọ bụrụ na ị hụ na ị na-eri ihe, na-a drinkingụ ihe ọ ,ụ ,ụ, na ịmị mmamịrị na-ewu ewu na Malamute, tinyere oke ibu.
Alsmụ anụmanụ nwere ogologo ndụ, okwu ahụike a na-ahụkarị na nkịta ndị toro eto, yabụ na ohere nke ụdị ọrịa a na-ebute ọrịa kansa dị ntakịrị.
Ekele maka teknụzụ, ọ na-ejikarị ịwa ahụ ma ọ bụ chemotherapy.
Ọrịa ọbara a na - akpata nkịta na - adịghị mma, a na - achọpụtakarị Malamutes mgbe ha merụrụ ahụ.
Fọdụ na-achọpụta na anụ ụlọ ha nwere hemophilia tupu ha agaa ịwa ahụ, ebe ọ bụ na ụmụ anụmanụ ga-eme nyocha tupu ha agabiga usoro ahụ.
A gaghị eme ka ndị na-arịa ọrịa a na-arịa ọrịa a na-eri nri ka ọ nwere ike ịgafe na mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Otu ihe na - emetụta nkịta buru ibu bụ ọrịa obi. Debe Mal gị na nlele site na ịhapụ ya ka ọ nwee ule kwa afọ.
Nwa nkita Alaskan Malamute nwere ike ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla $ 2,200 na $ 6,500 . Ọnụahịa ahụ na-adabere na agbụrụ ndị nne na nna, ọnọdụ nke onye na-azụ ihe na ewu ewu, yana ọnụọgụ nke pups dị.
I nwere ike ịtụ anya Nwa nkịta isii ruo 8 na-awụba n'oké osimiri , ma e nweela ndekọ banyere ruru 12 pups .
Ndị na-abịa site na ahịrị nkịta na-egosi na ha dị oke ọnụ karịa ndị nke a na-azụ site na anụ ụlọ Malamute na canines na-arụ ọrụ.
Tupu ị kwụọ ụgwọ maka nwa nkita ma ọ bụ bịanye aka n'akwụkwọ nkwekọrịta, buru ụzọ zute nne na nna ya na ndị ibe ya. Nke a ga - enye gị echiche banyere nkasi obi na nkịta puppy.
You nwekwara ike ịjụ onye na-azụ ya maka akwụkwọ ndekọ ahụike nke ndị nkịta na akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa iji hụ na ha dị mma site na ịzụlite ruo mgbe amụrụ nwa.
Ọ ga-akacha mma ma ọ bụrụ na ị jụọkwa ma ha ga-akpọghachi nwa nkita ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ilekọta ya ọzọ. A breeder breed ga-abụ karịa obi ụtọ na-enye ha pups a ụlọ ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ị dị njikere ịzụta nkịta ọkpọ nke Alaskan Malamute nke gị, ndị a bụ weebụsaịtị ole na ole nwere Mals dị maka ọrịre.
Ihe omuma nke Malamutes (Palmyra, MI)
Anyị enweghị ike ịnye ego maka ndị na-ere puppy a, mana anyị na-adụ gị ọdụ ka ị mee nyocha gị ma kwadebe a ajụjụ iji jide n'aka na ị na-emeso onye ọrụ ịzụ ihe dị mkpa. Mgbe ị nọ n'ịntanetị, ị nwekwara ike lelee Mals na Ahịa AKC .
Alaskan Malamute nkịta nkuchi
Imirikiti oge, ndị na-achị obe na-akwụsị na ebe obibi, mana ọbụlagodi ndị nwere ezi anụ ọhịa na-enwe nwute.
Ndị nwe ya nwere ihe dị iche iche, ihe dị mwute bụ na ndị ọzọ na-enweta nkịta dị ka Malamutes n'ihi na ha chere na ọ ga-adị mma ịnwe nkịta ọhịa yiri nkịta ọhịa, mana ha adịghị njikere ijikwa ma nwee ụdị ụdị a.
Ọ bụ ya mere anyị ji kwado ịkwado nkuchi maka onye ọ bụla na-achọ anụ ụlọ. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye nwe nkịta nwere oge nke maara ihe ụdị a dị, ị nwere ike nye gbahapụ ajị ajụọ ndị mmụọ ozi ohere nke abụọ .
Lelee saịtị ndị a na-azọpụta maka Mals. Somefọdụ n’ime ha na-agwakọta ngwakọta Alaskan Malamute ka ị wee nwee ike ịchọta ọmarịcha na omume dabara na ndụ gị:
Moonsong Malamute Nnapụta (Boise, NJ)
Alaskan Malamute Nnapụta nke North Carolina (Creedmoor, NC)
Chesapeake Area Alaskan Malamute Nchedo (Berryville, VA)
Alaskan Malamutes nọ n'elu 10 kachasị ike nkịta. Ha nwere ike ịdọrọ ibu ihe ruru 3,300 lbs (Kilogram 1,500).
Ọ bụ ezie na ha dị nwayọọ karịa nkịta ndị ọzọ na-agba agba, Malamutes nwere ike ịga njem dị anya karịa n'ihi ike na ume ha.
Malamdị Malamute bụ nkịta gọọmentị nke Alaska.
Ọ bụrụ na ị bụ onye nwe nkịta mbụ, ị nwere ike ịchọta ụdị ìgwè Alaskan Malamute ka ọ bụrụ ndị nọ ná mkpa na ihe ịma aka iji aka.
Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ha maka ndị nwere ahụmahụ na ezinụlọ ndị ejiri nnukwu nkịta mara ụlọ.
Ọzọkwa, ha nwere akwa mkpuchi ma sie ya maka gburugburu oyi , ya mere ha agaghị enwe ike iguzogide ọnọdụ ihu igwe na-ekpo ọkụ. Ọ bụrụ na ị bi na mba ebe okpomọkụ, nke a nwere ike ịpụta ụgwọ ọkụ eletrik dị elu.
Ewezuga inwe ike dị elu na mkpa nlekọta siri ike, onye Alaskan Malamute ọ bụla nke mebere mmekọrịta n'oge na ọzụzụ kwesịrị ekwesị, ha bụ nkịta na-arụsi ọrụ ike, ndị na-eguzosi ike n'ihe na ebu ebu .
Kedu ihe ị chere gbasara ụdị a? Akụkọ ọ bụla ịchọrọ ịkọrọ banyere Mal gị? Gwa anyị niile gbasara ya site na ịhapụ okwu n'okpuru.
Eze Onye Ọzụzụ Atụrụ
Shaịlo Onye Ọzụzụ Atụrụ
Malamlọ nyocha Malamute Mix
anụ ọhịa wolf aha alpha wolf
nkịta m na -akwara ụkwara na -akpọ nkụ
ọle ọphu ọ dụdu iphe dụ ẹji